Dowladda Sweden oo Heshiis cusub la gashay Shirkada "Moderna" si loo helo tallaalka Corona Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaDowladda Sweden oo Heshiis cusub la gashay Shirkada “Moderna” si loo helo tallaalka Corona
February 26, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Wasiirka arrimaha bulshada Lina Hallingrin ayaa ku dhawaaqday in dowladdu ay shalay heshiis cusub la saxiixatay shirkadda Mareykanka ah ee Moderna si ay u hesho qadar dheeri ah oo ah tallaalka Corona.
Iswiidhan waxay heshiis la gashay shirkadda inay hesho tallaalka, halka heshiiska cusub uu ka mid yahay 3.6 milyan oo qaadasho dheeraad ah oo ay Iswidhan heli doonto inta lagu jiro nuska dambe ee sannadkan.
Dhibaatooyin ayaa ka taagnaa bixinta tallaalka, taas oo aan ahayn inay dhacdo, ayay Hallingren ku tiri shir jaraa’id oo ay maanta qabatay.
Hallingrin wuxuu intaas ku daray in Raiisel wasaare Stefan uu ka qeyb galayo maanta iyo berri wadahadalo uu la yeelanayo madaxda Midowga Yurub iyo dowladaha ku saabsan shaqada talaalka.
In kasta oo Johan Carlson, Agaasimaha Guud ee Hay’adda Caafimaadka Dadweynaha, “illaa hadda, ay u muuqato in tallaalladu ay u shaqeeyeen sidii loogu talagalay.” “Waan ku faraxsanahay in aan idhaahdo xogteenu waxay tilmaamaysaa in talaalka dadka ugu badan ee ubaahan difaaca in ay yeelatay saameyn weyn,” ayuu raaciyay.
Waxayna Hay’adda Caafimaadka go’aansatay inay u oggolaato dadka da’da ah ee qaatay laba qaybood oo tallaalka ah inay la kulmaan eheladooda laba toddobaad ka dib qiyaasta labaad.